Waa maxay suunka ugu habboon ee surwaal kasta? | Ragga Stylish
Fasal yeesho | | Dhameystirka, nololeedka, fashion
Suumanka oo dhami isku mid ma aha, sidoo kalena dhammaan surwaal lagama jaro qaab isku mid ah. Dukaan kasta oo is ixtiraama waxaan ka heli karnaa a tiro badan oo moodooyinka suunka ah oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka iyo isku-darka suurtagalka ah, maaddaama surwaal kastaa uu si fiican ugu habboon yahay hal qaab oo suunka ama mid kale ah. Xagga dumarka, kala duwanaanshuhu waa mid aad u ballaaran, laakiin nasiib wanaag dhanka ragga, kala duwanaanshahan si weyn ayaa loo dhimay. Qodobkaan waxaan kugu hanuunineynaa inaad ku muujiso nooca suunka uu si fiican ugu shaqeeyo nooc kasta oo surwaal ah.
1 Isku dar suunka saxda ah ee surwaalka
1.1 Surwaalka Shiinaha
1.2 Oo leh suud
1.4 Suun lahayn
Isku dar suunka saxda ah ee surwaalka
Nooca suunka ku habboon ee noocan ah surwaal waa inuu noqdaa cidhiidhi ah iyo sidoo kale ganaax iyo doorbidayaa mid la mid ah surwaalka si aan isku dhicin
Oo leh suud
Sida chinos oo kale, nooca suunka waa inuu ahaadaa noqo mid cidhiidhi ah, leh cidhiidhi cidhiidhi ah, dhuuban iyo midabka surwaalka ama shaati haddii uusan ahayn midab aad u qurux badan. Haddii ay sidoo kale u dhiganta midabka kabaha, waxaan u tagi doonaa sidii burush.
Nooca noocan ah ee surwaalka ah ayaa si fiican u socda suumano ballaadhan oo guntin waaweyn leh. Waxaa laga samayn karaa dhar ama godad, sawirro ama midabbo. Laakiin dhex dhexaad ah, haddii aynaan ka fogaan meesha, xadhigga suunka waa inuusan soo jiidan fiiro xad dhaaf ah, laakiin waxaan dooneynaa inaan marwalba u soo jeedino dareenka kuwa nagala hadlaya.
Suunka ayaa muddo dheer ka joogsaday inuu ahaado shay lagama maarmaan ah, isagoo noqday uun qurxin, sidaa darteed haddii aysan daruuri ahayn nooca dharka aan isticmaalno dartiis, qasab kuma aha inaan ku khasbanaanno inaan xirano. Goorma waxaan xirnaa dhar isboorti (Uma jeedo tixraaca) suunka ayaa aad u badan, sida marka aan dooneyno inaan sawir aan dadaal lahayn ka bixinno meel ka baxsan xafiiska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dhameystirka » Waa maxay suunka ugu habboon ee surwaal kasta?